တရုတ်တူရကီရဲ့တိုးမြှင်အရေးပါမှုအတွက်ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာ | RayHaber
[14 / 12 / 2019] Gülermakသည် Warsaw Subway အတွက် Edilon Sedra EBS Solution ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်	31 နယ်သာလန်
[13 / 12 / 2019] Imamoglu မှ Erdogan သို့ Istanbul ၏တုန့်ပြန်ချက် - 16 လူ ဦး ရေသန်းနှင့်ချီသောလူများမသိ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[13 / 12 / 2019] Eskişehirလမ်းမြေအောက်ချဉ်းကပ်မှုအဆုံး	06 တူရကီ
[13 / 12 / 2019] Gaziray ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းပြန်ကြားရေးအစည်းအဝေးကျင်းပ	27 Gaziantep
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီတရုတ်နိုင်ငံ၏မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်စပ်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းတူရကီရဲ့တိုးမြှင်အရေးပါမှု
27 / 11 / 2019 06 တူရကီ, 86 တရုတ်, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
ဂျင်မျိုးဆက်နှင့်လမ်းစီမံကိန်းများကို turkiyenin onemi ၏အတိုင်းအတာတိုးပွားလာနေသည်
တရုတ်အတွက်ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို၏တူရကီရဲ့တိုးမြှင်အရေးပါမှု; Ankara ၏အဆိုပြုထားသည့်အလယ်အလတ်စင်္ကြံလမ်းသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ Agenda Road Conference တွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ဥရောပကနေတိုးချဲ့ကုန်သွယ်မှုကွန်ယက်တွင်တူရကီရဲ့အရေးပါပုံကိုနေ့တိုင်းတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ Generation Road နယ်နိမိတ်အတွင်းတရုတ်ပြည်မှပထမဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားသည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ Marmaray ကိုအသုံးပြုပြီးဥရောပသို့ရောက်ရှိလာသည့်အခါအလယ်စင်္ကြံကိုထပ်မံအာရုံပြုလိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗဟိုစင်္ပဏာမခြေလှမ်းသည်၎င်း၏ရုရှားတွင်ကတိကဝတ်များနှင့်ဘေဂျင်းအစိုးရလျှော့ချရန်တူရကီတို့ကအဆိုပြုထားနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကြွလာအဖြစ်အကွာအဝေးရှည်သည်။ ထို့ကြောင့်, တူရကီရဲ့ဗဟိုစင်္ပဏာမခြေလှမ်း, Venlo အတွက်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည့် 26-27 ခါးပတ်လမ်းညီလာခံထဲမှာ, နယ်သာလန်အစီအစဉ်အပေါ်ပထမဦးဆုံးကို item ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆန်းစစ်ခြင်းများအရ Baku-Tbilisi-Kars လိုင်းသည်လုံခြုံစွာလည်ပတ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။ Kars မှ Edirne ကနေအစာရှောင်ခြင်းကုန်တင်ရထား, တူရကီအကောင်အထည်ဖော်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကနောက်ထပ်ဗဟိုစင်္၏အရေးပါမှုကိုတိုးပွါးစေပါလိမ့်မည်။ တူရကီနှင့်အတူ Kars မှ Edirne ကနေရထားလမ်းလမ်းကြောင်းကတရုတ်အင်တာဗျူးဆက်လက်ကြောင်းလူသိများသည်ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်တရုတ်စာနယ်ဇင်းများသည်အလယ်လမ်းကိုတံတားလမ်း၏အရေးပါသောမှတ်တိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းရုရှားကစင်္ကြံတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်သူတို့တူရကီ Marmaray အတွက်ကုန်တင်ရထားအမြန်နှုန်းနှင့်အကွာအဝေးအတိုကောက်အားဖြင့်သံလမ်းကိုက်ညီတဲ့ကပြောပါတယ်။ ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံမှ Venlo မြို့ရှိနယ်သာလန်သို့ရထားများသည်ကက်စပီယံ Trans-Caspian အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (TITR) ကိုဖြတ်ကျော်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ တရုတ်ထံမှ ထွက်. ကုန်တင်ရထား, ကာဇက်စတန်-ကက်စပီယန်ပင်လယ်-အဇာဘိုင်ဂျန်-ဂျော်ဂျီယာ-တူရကီဥရောပထွက်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ 18 သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Xi'an မှထွက်ခွာပြီးနောက်ပထမဆုံးချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏မြို့တော်ပရာ့ဂ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ (Çinhabဖြစ်ပါသည်)
One Generation A လမ်းစီမံကိန်းÇinli
ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်းဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေ 40 လူဦးရေသန်းထမြောက်မည်
အဆိုပါ 15 izban Plus အားငွေခေတ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစတင်ခုနှစ်တွင်
အဆိုပါ 118 ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးများတွင်စီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုး
Anatolia '' တစ်ဦးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Way ကို '' နှင့်အတူပြေးကြလိမ့်မည်
Belt and Road Initiative 'Win-Win' ချဉ်းကပ်မှု…
လျှပ်စစ်နှင့်တူရကီအတွက် Hybrid မော်တော်ယာဉ်အရောင်းရှိကိုတိုးပှား
Driverless နှင့် Rail-Free Tram များကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်သည်
နောက်ဆုံးတော့ဇွန်လအတွက်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးက Metro ပို့ကုန်လမ်းအတော်လေး
'' တော်လှန်ရေး '' ပြန်လည်အတွက်တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းမော်တော်ကား
အဆိုပါ MU ရုရှားလမ်းကြောင်းဖုံးအုပ်တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း,?
Kuşak Yol Konferansı
Orta Koridor inisiyatifi
Istanbul Metro နိုင်ငံတကာထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်
Gülermakသည် Warsaw Subway အတွက် Edilon Sedra EBS Solution ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်
insmet Pasha ၏ကက်ဘိနက်ရှိသမိုင်းတွင်ယနေ့ - 14 ဒီဇင်ဘာ 1925
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကာဇက်စတန် ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီ
Imamoglu မှ Erdogan သို့ Istanbul ၏တုန့်ပြန်ချက် - 16 လူ ဦး ရေသန်းနှင့်ချီသောလူများမသိ
တူရကီရဲ့ Kardemir ထူသည့်ကွိုင်ချင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
2020 ဘတ်ဂျက်တွင်အကြီးမားဆုံးသောဝေစုကို Istanbul Metro Investments မှရရှိသည်
Samsun Sivas မီးရထားလမ်းပြProbleနာများမပြီးဆုံးပါ